नेपाली चलचित्र नजुधाउन के गर्नुपर्ला ? - केवल एक प्रश्न - प्रकाशितः भाद्र १२, २०७४ - साप्ताहिक
नेपाली चलचित्र नजुधाउन के गर्नुपर्ला ?
नजुधाउन सम्भव नै छैन । वर्षमा ५२ हप्ता हुन्छ भने चलचित्र झन्डै सयको हाराहारीमा बन्छन् । यो समस्या हाम्रोमा मात्र होइन, संसारभरिकै चलचित्र उद्योगमा छ ।
- भानुप्रताप, अभिनेता
आपसी समन्वय नभै केही हुनेवाला छैन । तँभन्दा म के कम भन्ने सोचले गर्दा यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो ।
- विनोद पौडेल, प्रदर्शक/अभिनेता
म बलियो छु, मेरो सिङ बलियो छ भनेर जुध्न खोज्नेहरूको सिङ निकाल्नुपर्छ । चलचित्र धेरै बनेर पनि यस्तो भएको हो ।
इन्द्रेको बाउ चन्द्रे आए पनि केही नाप्न सक्दैनन् ।
- जगदीश्वर थापा, निर्देशक
कि नेपालमा घटीमा ५ करोड लगानी गरेर चलचित्र बनाउन थाल्नुपर्‍यो, अन्यथा संख्यात्मक रूपमा यति धेरै चलचित्र बनिरहेका छन् कि प्रदर्शनमा नजुधी सुखै छैन ।
- छविराज ओझा, निर्माता
अरूले चलचित्र बनाउन बन्द गर्नुपर्‍यो, मैले मात्र बनाउन पाउनुपर्‍यो ।
- रेखा थापा, अभिनेत्री
वितरकहरूको भाले भिडन्तमा निर्माताहरू पिल्सिरहेका छन् ।
- अनन्तप्रसाद तिमिल्सिना, निर्माण नियन्त्रक
यो हुनु भनेको एक निर्माताले अर्को निर्मातालाई गरिब बनाउनु हो । एक त नेपाली चलचित्र हेर्न कमै दर्शक हलमा पुग्छन्, त्यसमा पनि चलचित्र जुध्दा नेपाली चलचित्रलाई ठूलै घाटा भैरहेको छ । समझदारीमा अघि बढ्नु जरुरी छ ।
- वर्षा बस्नेत, सञ्चारकर्मी
आवश्यकताअनुसार चलचित्र बन्नुपर्छ ।
- प्रदीपकुमार उदय, वितरक
अंग्रेजी तथा हिन्दी चलचित्रको तुलनामा नेपाली चलचित्रलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीति, शक्ति र इगोले होइन, ध्यान दिएर चलचित्र विकास बोर्ड चलाउनुपर्‍यो । बोर्डले नै समस्या समाधन गर्ने नीति ल्याउन सक्छ ।
- सागरराज, संगीतकार
जुधाउनु भएन । निर्माताले सल्लाह गरेर चलचित्र प्रदर्शनमा ल्याउनुपर्‍यो ।
- भूपेन्द्र खड्का, गीतकार
वर्षको दिन बढाएर ३६५ लाई ७३० दिन गर्नुपर्‍यो ।
- आर्यन सिग्देल, अभिनेता
चलचित्रको वर्गीकरण जरुरी छ । सँगसँगै चलचित्र भवन वर्गीकरण गरेर हलअनुसारका चलचित्र प्रदर्शन गरिनुपर्छ ।
- बाबु बोगटी, गायक
निर्माता संघले सबै निर्मातालाई एक बनाएर लानु जरुरी छ । सबै निर्माता मिलेर गए मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ ।
- बीबी फुयाँल, निर्देशक
वितरकहरूले लापरवाही गर्नु भएन । निर्माताहरूले इगोको लडाइँ लड्नुभन्दा दर्शकको चाहनामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्‍यो । मुख्य कुरा चलचित्र पनि कम बन्नुपर्छ ।
- कृषा चौंलागाईं, निर्मात्री
चलचित्रसँग नाटक जुधेको भए पो चिन्ता गर्नु ? कि त वर्षको हप्ता बढाएर ९० बनाउनुपर्‍यो कि त अत्यधिक बन्ने चलचित्रको संख्या घटाउनुपर्‍यो अन्यथा नजुधी सुखै छैन ।
- दीपकराज गिरी,अभिनेता
जुधाउनैपर्ने अर्थात् जुध्नैपर्ने बाध्यता छ । ठूला–ठूला भाषण गर्ने र संघसंस्था हाँक्ने वरिष्ठज्यूहरूले व्यवस्थित गर्नुपर्ने हो । उहाँहरूलाई आसन ग्रहण गर्दैमा फुर्सद छैन, म बिचरो अज्ञानी प्राणीले के भन्नु अनि के गर्नु र खै ?
- निर्मल शर्मा, अभिनेता
केही गर्नै पर्दैन, किनभने यो कुनै समस्या नै होइन । नेपाली चलचित्र क्षेत्र यदि व्यवसायिक उद्योग हो भने यो त बजारको माग हो । धेरै सिनेमा बनेपछि प्रतिस्पर्धा त हुन्छ नै, त्यसले दर्शकलाई छनोटको स्वतन्त्रता दिन्छ । नेपाली चलचित्र भन्नेबित्तिकै जस्ता पायो त्यस्तालाई माया गर्नुपर्छ भन्ने छैन । वर्षभरिमा एउटा मात्र चलचित्र बने पनि सबै मानिस त्यो चलचित्र हेर्न जाँदैनन्, मानिसहरू त्यही चलचित्र मात्र हेर्न जान्छन्, जुन चलचित्रले प्रचारप्रसारको क्रममा राम्रो सम्भावना देखाएको छ वा आफैंमा राम्रो बनेको छ ।
- सोमनाथ खनाल, नाट्यकर्मी
चलचित्रको ग्रेड छुट्टयाएर, हप्तामा एकदेखि दुईभन्दा बढी चलचित्र चलाउन दिनु भएन । होइन भने हप्ताको दुई–तीन बारमा दुई–तीनवटा रिलिज मिति तोक्न सक्नुपर्‍यो ।
- सत्यराज चौंलागाईं, निर्देशक
मैले चलचित्र बनाइरहेको छैन, त्यसैले अहिले जे भैरहेको छ ठीक भैरहेको छ ।
- कुमार भट्टराई, निर्देशक
सातामा दुईवटासम्म त ठीकै हो । त्योभन्दा बढी रिलिज गर्न नपाउने नियम बनाउनु बेस ।
- मिलन श्रेष्ठ, चलचित्र सम्पादक
चलचित्र जुध्नुको मुख्य कारण भनेको धेरै चलचित्र निर्माण हुनु हो । चलचित्र कलाको एक स्वतन्त्र विधा भएकाले चलचित्र निर्माणमा अंकुस लगाउनु साह्रै गाह्रो काम हो, तर स्वयं निर्माण कम्पनी तथा निर्माताहरूले चलचित्रको संख्याभन्दा आपसमा सहकार्य गरी स्तरीय चलचित्र निर्माण गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्ला, जसले स्तरीय एवं व्यवसायिक रूपमा सफल चलचित्र निर्माण हुनुका साथै चलचित्र जुध्ने समस्या पनि हल होला ।
- राज शाह, नाट्यकर्मी
निर्माता संघ र प्रदर्शकबीच दह्रो समन्वय हुनुपर्‍यो ।
लाखौं डुब्दा धेरैको घरबार डुबेको छ भन्ने कुरा मनन गर्दै सहमतीय प्रणाली लागू गरी पालैपालो चलचित्र चलाउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ र अर्काको दु:खलाई पनि आफ्नै सम्झनुपर्छ ।
निर्माता, निर्देशक तथा वितरकमा बजार व्यवस्थापनको अल्पज्ञान भएर होला यो समस्या सिर्जना भएको ।
- अच्युत घिमिरे, नृत्य निर्देशक
धेरै चलचित्र बन्न थालेपछि जुधिहाल्छन् नि । हिम्मत हुनेले जुधाउँछन्, नसक्नेले घुँडा टेक्छन् । जुध्न दिनु न, तपाईंलाई के–को टेन्सन ?
प्रकाशित :भाद्र १२, २०७४
स्याङ्जाको दसैं नै रमाइलो
निर्देशकको चित्त दुखेपछि